Mashiinka Lathe-ka Birta ee Iibinta, CNC, Buugga, Soo-saaraha Shiinaha & Alaab-qeybiye
Mashiinka Milling Universal
Mashiinka Milling Gaaban
Mashiinka Mashiinka Horizontal Universal
Mashiinka Qodida iyo Qodista
Mashiinka Lathe-ka Birta
Mashiinka CNC Lathe
CNC biibiile dunta lathe
MAKIINADDA ISTIRAALKA BIRTA
Mashiinka Saxaafadda ee Haydarooliga
Sheet Haydarooliga Birta Bir Shear
Mashiinka Laabista Xaashida Haydarooliga
Saddle Guuritaanka Dhulku Furimaha TSA40100
Saddle Guuritaanka Dhulkaba Furimaha TSA2050
Mashiinka Mashiinka Mashiinka M618
Mashiinka Qodida Radial
Halkan ayaad joogtaa: Hoyga1 / Mashiinka Birta iibka ah
Haddii aad rabto inaad ka shaqeyso baarka ama nooca diskiga shaqeynta birta, si aad u hesho dusha sare ee dhalaalaya, si aad uga baaraandegto dunta ka baxsan hareeraha wareega, si aad uga baaraandegto daloolka gudaha, ama aad uga baaraandegto wejiga ugu dambeeya si aad wajiga ugu dambeeya uga dhigto xitaa, markaa latheena biraha waa xulasho wanaagsan. Lathes birta ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa soo saarista biraha, rarida, batroolka, gawaarida, dhuxusha iyo meelaha kale.
Marka ay timaado xulashada mashiinka lathe, waxay inta badan kuxirantahay dhererka, cabirka, culeyska iyo qaabka waxqabadka ee qeybta shaqada. Lathe Horizontal, lathe toosan waa la dooran karaa. Hadday tahay wax soo saar ballaaran, ikhtiyaari u fiirso lathe CNC, laakiin haddii tirada waxsoosaarka shaqadu aad u yar yahay, markaa lathe CNC waa qashin yar, waxaad dooran kartaa lathe gacmeedka. Tayadayada lathe ayaa xasilloon, laga soo bilaabo isha xakamaynta tayada wax soo iibsiga, qeexitaanno dhammaystiran. Weydiinta waa la soo dhaweynayaa.
Su'aalo?Naga soo wac lambarka + 86-15318444939, oo la hadal mid ka mid ah khubaradayada khubarada ah.Waxaad sidoo kale buuxin kartaa foomkeena xiriirka.
Mashiinka lathe-ga ee Cnc
Wareegga mootada Howlsocodsiinta waxaa gacanta ku haya nidaamka CNC, quudinta otomaatigga ah, oo ku habboon howlaha baadi goobka
Mashiinka lathe ee taagan
Qalabka shaqadu wuxuu u rogmadaa si gaabis ah oo gooyaha ayaa u dhaqaaqaya kor iyo hoos. Waxay ku habboon tahay qalabka shaqada oo leh culeys ballaaran iyo dhexroor
Mashiinka lathe culus
Lathe dunmiiqa daloolku waa mid aad u weyn, dhererka howshu wuxuu ka badnaan karaa 10 mitir, wuxuu adkeysan karaa culeyska qalabka shaqada illaa dhowr tan
Mashiinka lathe dunta ah
Ku habboon dhajinta dhuumaha dhumuc dheer iyo weyn, Aaladda dunmiiqa sidoo kale wey ballaadhan tahay
Mashiinka lathe gacanta
Xakamaynta Buugga ee quudinta iyo hagaajinta, oo ku habboon hawlgalka non-Dufcaddii
Lathe gogol sariirta
Ku rakib sardho laga saari karo booska sariirta lathe, Kordhi dhexroorka leexashada ee nooca disk lathe
Slant mishiinka lathe xun
Jirka sariirta wuxuu leeyahay xagal u janjeera gaar ah, dheecaan jilicsan oo habboon
Ku dar madaxa awoodda iyo dhidibka C on lathe for axdi iyo qodista, heer sare otomaatiga
Mashiinka lathe yar
Ku habboon shaqeynta yar ee shaqada, qiimo jaban, Miisaanka shaqadu waa dhowr boqol oo kiilo garaam
Marka loo eego habka xakamaynta, waxaa loo qaybin karaa CNC iyo mid caadi ah
Marka loo eego xaglaha sariirta sariirta, waxaa loo kala qaybin karaa bedstead nabad beddel
Marka loo eego salka, waxaa loo qaybin karaa lathe koolo iyo lathe caadi ah
Mashiinka lathe birta waa nooc ka mid ah qalabka mashiinka goynta birta caalamiga ah, oo si ballaaran loo isticmaalo, loo rogi karo wareeg, dalool, iyo dhammaad.
Marka dhererka mashiinku aanu ku filnayn, qalabka shaqadu wuxuu mari karaa daloolka dhexe ee dunmiiqa si loo ballaariyo mashiinka lathe-ka. Tani waxay u baahan tahay dhexroorka dunmiiqa daloolka inuu ka weynaado dhexroorka shaqada.
Maxay musqulaha aad u khatar u yihiin? Buugga badbaadada ee hawlgalka lathe.
Lathes waa aalado mashiinno aad u badan, oo si ballaaran loogu adeegsado ka shaqeynta birta. Sidoo kale aad ayey khatar u tahay haddii latheeska aan si habboon loo isticmaalin.
Lathe waa aalad mashiinka lagu farsameeyo birta culus, jidhku wuxuu ka kooban yahay bir. Caadi ahaan culeyska in ka badan 1 tan, haddii lathe ballaaran, culeysku wuxuu gaari karaa in ka badan toban tan. Marka lathedu taagan tahay, way fududahay in waxyeello soo gaadho haddii qof u dhow si kama 'ah u dhaco oo u taabto lathega.
Marka lathe uu bilaabo inuu ordo, dunmiiqa wareegga xawaaraha sare wuxuu kexeeyaa qeybta shaqada inuu isku shaandheeyo, haddii shilka chuck, markaa bawdada ayaa duusho, fududaato in loo horseedo dhaawacyo halis ah, oo aan ka yareyn shil baabuur. Ama timaha dhaadheer ee qofka, gacmo gashi, haddii uusan si fiican u habaysnayn, sidoo kale way fududahay inuu ku lug yeesho mashiinka.
Awoodda ay isticmaasho lathe-ka guud ahaan waa koronto warshadeed, haddii shil shil koronto uu dhaco, waxaa jira qatar koronto.
Loogu talagalay hawl wadeenada
1 waa inuu ogaadaa sida loo shaqeeyo lathe, haddii qof bilow ah, waa inuu khibrad u leeyahay howl u qabashada shaqaalaha hagida, haddii kale looma ogola inuu ka shaqeeyo lathe.
2 fiiro gaar ah u yeelo xirashada, waa inaad adkeysaa suunka, dharka looma oggola inay yeeshaan wax dun ah, ama suunka dharka oo sudhan. Gacmo gashi ma jiro, faraantiyo iyo saacado ma jiraan. Xidho ilaaliyaha indhaha badanaa.
1 koronto siinta, waa inay hubisaa inaysan jirin daadad koronto, siligga dhulka ayaa si fiican u salka ku haya
2 Qeyb kasta oo saliidaynaysa waa inay lahaato saliid
3 Lathe waa inuu joojiyaa inuu ordo markuu dajinayo qalabka shaqada ama uu hubinayo saxnaanta shaqada
4 markii uu lathegu socdo, shaqaaluhu waa inay masaafo ka fog latheega ka fogaadaan
5 Markii lathesyo badan ay is dhinac fadhiyaan, u janjeer xagal cayiman
6 Ha u isticmaalin gacmahaaga inaad nadiifiso waxyaabaha birta laga duubay
7 Kahor shaqada lathe, hubi in cufka qufulka uu xiran yahay, hubi in qalabka shaqada la isku haysto
8 Kahor buuxinta iyo rarka lathe culus, gabal alwaax ah waa in la dhexdhigaa qaybta shaqada iyo tareenka hagaha si looga ilaaliyo in qaybta shaqadu si kedis ah ugu dhacdo
Waa maxay faraqa u dhexeeya mashiinka lathe cnc iyo mashiinka lathe gacanta?
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya labadooda ayaa ah qaabka loo xakameeyo.
Habka xakamaynta ee lathe CNC: Nidaamka CNC - xakamaynta - gawaarida gawaarida
Hawlwadeenku wuxuu u baahan doonaa inuu jarto barnaamijka isagoo adeegsanaya barnaamijka G code, oo loo soo geliyay nidaamka CNC ee lathe, lathe wuxuu ogaan doonaa howsha otomaatiga ah ee shaqada, ka hor intaan la dhameystirin, wax faragelin ah oo gacanta ah mar kale.
Habka xakamaynta ee lathe caadiga ah: waxay u baahan tahay hawl gacmeed, laguma maamuli karo xakamaynta, inbadanna lama qorsheyn karo.
Miyaad xirataa galoofyo markaad shaqeyneyso musqul?
Aad bay khatar u tahay.
Kaliya ma xiran karo gacmo gashi, kabaha si aad u xirto dharka shaqada oo adag, xirmooyinka suunka, timaha dhaadheer si ay u xirtaan koofiyad difaac ah, ha xiran gacno gashi, jarista qalabka shaqada iyo fiiqista waa inay xirtaan muraayadaha indhaha.
Haddii aad ku shaqeyneyso lathe caadi ah, waxaa jira sababaha soo socda:
Musqulku si buuxda uma xirna, shaqaaluhuna waxay ku dhow yihiin aaladda shaqada,
Gacanta ku wareeji shaag gacmeedka si joogta ah,
3 gacanta ku sii daayo ama xir qufulka
Lathe-ku wuxuu ku tiirsan yahay matoor awood-sare leh si uu u wareejiyo dunmiiqa si uu xawaare sare ugu rogrogo oo uu ula shaqeeyo galoofisyada, sidaa darteed aad ayey u fududahay in la isku xiro ama lagu xiro mashiinno.
Sida loo doorto qalabka saxda ah ee lathe
Waxyaabaha soo socda waa in la tixgeliyaa marka la dooranayo nooca qalabka:
(1) Si joogto ah u farsameynta inta ugu badan ee suurtogalka ah hal mar;
(2) Nidaamka goynta, qalabku ma faragelin karo dusha sare ee shaqada;
(3) Waxay hagaajin kartaa hufnaanta qalabka iyo tayada dusha sare;
(4) Qalab macquul ah iyo adkeysi.
1. Nooca qalabka leexinta
CNC lathe guud ahaan wuxuu adeegsadaa qalab isku dhejisan oo isku dhejisan. Mindida iyo jirka qalabka tilmaanta ayaa leh heerar. Qalabka daabku waa carbide sibidh leh, carbide sibidh leh oo dahaadhay iyo bir xawaare sare leh.
Sida laga soo xigtay shaqooyinka kala duwan, waxaa loo qaybin karaa magaabay goobeed, silsilad dunta bannaanka ah, mashiinka dunta gudaha, goynta goynta, goynta mashiinka godka (oo ay ku jiraan qoditaanka daloolka dhexe, caajiska caajiska, tuubada, iwm.).
Marka qalabka tusmada leh loo isticmaalo in lagu hagaajiyo daab aan regrinding, sida caadiga ah waxay qaadataa qaab dhismeedka block of fur, fur saxan riixaya, pin fur ama wejiga.
2. Xullo wax daab ah
Waxaa jira laba nooc oo qalab caadi ahaan loo isticmaalo rogista birta xawaaraha sare leh iyo carbide shamiideysan.
Birta xawaaraha sare leh badanaa waa maaddo maran, adkeynteeda ayaa ka wanaagsan carbide sibidh leh, iyo adayggiisa, xirashada caabbinta iyo adkaanta cas ayaa ka xun carbide sibidhka ah. Kuma haboona in alaabada lagu jaro qalafsanaan sare iyo goyn xawaare sare leh. Qalabka jarista birta xawaaraha sare leh waxay u baahan yihiin inay soo saaraan soo saaraha ka hor intaan la isticmaalin, fiiqidduna waa ku habboon tahay, taas oo ku habboon dhammaan noocyada qalabka goynta aan caadiga ahayn ee leh baahiyaha gaarka ah.
Waxyaalaha carbide ee sibidhka leh waxay leeyihiin waxqabad goyn heer sare ah waxaana si ballaaran loogu adeegsadaa rogista NC. Waxyaalaha carbide ee sibidhka leh waxay leeyihiin taxane faahfaahin qeexan, iyo xuduudaha farsamo ee gaarka ah iyo waxqabadka goynta waxaa bixiya soo saaraha qalabka.
Marka loo eego heerka caalamiga ah (ISO), waxyaabaha la geliyo ee carbide ee sibidhka loo qaybiyay waxay u qaybsan yihiin saddex qaybood: birta-birta ah, birta m-ahama iyo birta k-ka samaysan oo ku saleysan adkaanta iyo foorarinta karbaydhka sibidhka ah. Lambarada 01, 05, 10, 20, 30, 40 iyo 50 waxaa lagu daraa kadib marka la helo lambarrada K, P iyo m ee qeybta hoose. Guud ahaan, tiradu markay yartahay, adkaanta ayaa sareysa, laakiin hoos udhaca adkaantu waa; taa bedelkeed, markasta oo tirada ay sii weynaato, adkaanta ayaa sareysa, laakiin hoos u dhaca adkaanta ayaa ah.
Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira qalab qalab adag leh oo xirta iska caabin ka sarreysa carbide sibidhka leh, sida dhoobada, nitride cubic boron nitride iyo dheeman.
Dayactirka iyo hagaajinta mashiinka Lathe
Markaad isticmaaleyso mashiinka lathe, tilmaamaha soo socda waa in la ilaaliyaa:
1) Kabaha saliida ee haamaha saliida oo dhan waa in markasta lagu hayaa bartanka qiyaasta saliida; haddii kale ama saliid aan waxtar lahayn ama kuleyl badan oo lumiya awoodda ayaa dhici doonta.
2) Dhammaan dhibcaha saliidda waa in lagu sifeeyaa saliid saafi ah xilliyada caadiga ah.
3) Si joogta ah u hubi socodka saliida ee muraayadda aragga si loo hubiyo in sifeyn sax ah lagu sameeyo madaxa iyo sanduuqa quudinta.
4) Hubi oo hagaaji xiisadda suumanka baabuurta xilliyada caadiga ah.
5) Kahor hawlgalka maalinlaha ah, wad mootada weyn ee bilaa camalka ah hal daqiiqo, ka dibna ku shaqayso dhammaan qeybaha lathe adigoon wax xamuul ah qabin, saliid buuxi saliidda qubeyska ee salka.
6) Iyadoo dunmiiqa xawaare sare ku socdo, isbeddel lama filaan ah oo ah xawaaraha id lama oggola.
7) Qalabka loo yaqaan 'Leadcrew' waxaa loo isticmaalaa dunta oo keliya. Weligaa ha u isticmaalin inaad ku rogto hawlgalka.
8) Markaad codsaneyso nasasho joogta ah ama nasashada raacsane, dusha sare ee nasashada waa in la subagaa.
1). Isku hagaajinta dunmiiqa
Nadiifinta xad-dhaafka ah ee dhalida dunidu waxay keentaa “shaqeysiin dhameystir la’aan ah” Iskeelka wareegga wareegga wareegga waxaa ka mid ah socodka radial-out iyo axial run-out. Radial-out-out waxaa damaanad qaadaya labalaab isku duuban oo isdabajooga ah oo ku yaal wejiga hore ee dunmiiqa iyo isku xigta kubad riixid shucaac ah oo gadaal ka mareysa dunmiiqa halka wareegga wareegga wareegga uu damaanad qaadayo kubbadda is riix riix ee isku xigta ee salka dambe ee dunmiiqa. Habka hubintu waa sida ku cad sheyga 5 iyo 8 ee shahaadada imtixaanka. Haddii saxsanaantu aysan ahayn waxa la weydiisto, xaaladaha badankood. Habka waa kuwan soo socda: ku hagaaji lowska dunmiiqa si aad uga saarto nadiifinta dunmidda dunmiiqa iyo xir hal lowska ka dib hagaajinta. Haddii wareegga wareegga uusan ku xirnayn waxa la weydiiyay haddana ku hagaaji gadaal ujeedo habka xayeysiinta ah ee kor lagu sharaxay. Ka dib hagaajinta ka dib, ku shaqee dunmiiqa bilaa xawaare sare saacad ah una fiirso in heerkulka dhalista uusan ka badnaan karin 70 ℃. Haddii ay dhaafto, marka hore dabci boolal qufulo ah oo ku yaal lowska la dhigay, markaa iniinyaha waa in xoogaa la furfuraa, ka dib hagaajinta, dib loo hagaajiyaa boolal qufulka.
2）. Chain Wheel Adkeynta
Isbeddelka xawaaraha dunmiiqa waxaa gacanta ku haya wiishka hore ee madaxa. Kabareeyayaasha xakamaynta waxay u wareejin karaan qalabka isweydaarsiga iyada oo loo marayo farsamada gawaarida silsiladda iyadoo la helayo xaalado kala duwan Haddii xawaaraha dunmiiqa dhabta uusan u dhigmayn xawaareheeda qaraabada ah ee lagu xardhay xawaaraha dunmiiqa tilmaamaya dialku waa inuu sameeyaa hagaajinta habka shaagagga silsiladda. Marka hore dabci fur, leexo usheeda dhexe een dusha ka dhig silsiladda illaa tilmaanta xawaaraha dunmiiqa lagu hagaajiyo meeshii la rabay, ka dib, adke adkee si aad u ogaato usheeda dhexe kubbadaha birta ah.
3). Hagaajinta Gawaarida
Nadiifinta udhaxeysa isweydaarsiga iskudhafka iyo dariiqyada tilmaamaha iyo inta udhaxeysa iskudhafka nasashada iskudhafka iyo dariiqyada tilmaamaha waxaa lagu hagaajiyaa gibladaha iyadoo loo kala saarayo siday u kala horreeyaan. Xaqiiqdii dhabarka dambe ee wareejinta isdaba-marinta hogaanka ka dhalata xirista lowska la isku hagaajin karo, ka fur daboolka miraha nutska kuna soo xoqo furka ilaa dhabar-jabinta laga tirtirayo. Ka dib adkee fur.
4). Isku hagaajinta Xiisadda Suunka Baabuurta
Mootada wadida ugu weyn waxaa lagu rakibay lugta lathe. Kala sixi daboolka hore ee lugta lathe, xiisadda suunka waa la hagaajin karaa iyadoo la beddelayo u jeedka saxanka salka gawaarida iyada oo loo marayo lowska. Xiisada suunka mootadu waxay kuxirantahay masaafada udhaxeysa bartamaha gawaarida gawaarida iyo tan wareega ee madaxa.
Falanqaynta qaladka guud ee mashiinka Lathe, iyo hababka daaweynta
Maya Joojinta Sababaha Hababka Nadiifinta
1 Awood ma noqon karto
Loo gudbiyo mashiinka
Bedelka safarka lama taaban karo Fur albaabka si aad u maroojiso shaashadda nalka, si dhaqsi leh u dhaqaaji banaanka, ka dibna dib u dheji fur
2 Mashiinka dunmiiqa ma socon karo Beddelka safarka lama isticmaalo Fur albaabka si aad u maroojiso shaashadda nalka, si dhaqsi leh u dhaqaaji banaanka, ka dibna dib u dheji fur
3 Xakamaynta qalabka wax lagu beddelo ayaa gubtay Awoodda korantada ee isticmaalaha kuma saabsana korantada loo qoondeeyey. 1. Iyadoo la raacayo howsha, ku beddel guluubka nalka "24v, 40w" mid
2. Beddel tarjumaanka naftaada.
4 Xamili on headstock ma karo
La kala qaado, si xawaaruhu u awoodo
Lama badali karo
1.Marka furku wuxuu noqdaa mid dabacsan
2. looxyada la jaangooyey waxay noqonayaan kuwo dabacsan.
1. Saxanka wareegsan kala bixi, oo adkee furfurka taagan.
2. Ku dheji labada boolal saboolka.
5 Marka dunidu ku socoto xawaare hoose, ma beddeli karto xawaaraha Lowska ku yaal usheeda dhexe eccentric, kaas oo lagu dhejiyay slind spindle, wuxuu noqdaa mid jilicsan. Fur daboolka kore ee madaxa oo isku wareeji halbowlaha dusha sare, isla markaana u dir mashiinka xawaare sare, xawaare hoose ama boos banaan .Haddii kooxaha geerka ay si caadi ah u hawl galaan, quful lowska.
6 Dunmiiqa madaxa ayaa si tartiib ah u bilaabmaya Farqiga u dhexeeya saxannada isqurxinta ee usheeda dhexe I ee madaxa waa weyn yahay. Ka dib hagaajinta saxannada saxanka, kor u qaad qalabka kabaalka dunmiiqa si aad u tijaabiso illaa dunidda ay ku jirto xaalad caadi ah.
7 Lathe waa gariiri marka uu dillaaco ama qallafsanaanta qalabka shaqada kuma xirna shuruudaha. 1. Sixitaanka dunmiiqa iyo iskuxirka gawaarida sax ma ahan.
2. Xagasha raajiska ama xagasha banaynta waa mid aad u weyn.
3. Maaddada qalabku sax maahan.
4. Xoog shank kuma filna. Ama kantiilku aad buu u dheer yahay.
5. Isuduwidda u dhexeysa isweydaarsiga qulqulka iyo salka ma fiicna.
1. Si habboon ugu dheellitir mashiinnada dunmiiqa iyo laba taarikada hore
2. Kala shiidida qalabka si waafaqsan shuruudaha.
3. Xulo qalabka ku habboon qalabka sida waafaqsan qalabka shaqada。
4. Waxay hagaajinaysaa dhererka canti ee shand.
5. Xoqo wareegga wareegga.
8 Qiyaasta taper-ka ee qaybta shaqada waa mid ka baxsan shuruudaha marka mashiinka loo isticmaalo in lagu rogo dusha sare ee cylindrical. Rakibaadda mashiinku ma ahan mid jiif ah Ku hagaaji lathe sida ku cad buugga hawlgalka。
9 Lathe si toos ah uma quudin karo. 1. Lever & midig beddel kabaalka si sax ah looma isticmaalo.
2. Geerida lulid marka ay goyso.
1. Hubi kabaalka. Markay midigta tahay, mashiinku si caadi ah ayuu wax u quudin karaa, markuu bidix yahay, mashiinku ma quudin karo.
2. Lowska ku yaal meertada luliddu waa mid jajaban. si ay qalabku u soo baxaan. Dib-u-habeyn geerka ku adkee lowska jirkiisa.
10 Dabaqa ma dhaqaaqi karo xawaare sare 1. Fiyuusku waa gubtay.
2. Badhanka ma xiriiri karo.
1. Beddel fiyuuska.
2. Fur gacan-qabsiga dhaqsaha badan ee xawaaraha sare soona bax batoonka: hagaaji labada naxaas iyo barta xiriirka. Isla mar ahaantaana, riix qodobbada, cusbooneysii badhanka.
11 Sawaxanka ayaa sarreeya marka mashiinku socdo. Boosaska waa la burburiyey. 1. Haddii buuqa wiishka aan sarreeyo ka dib markii mootadu bilawdo, culeyska mashiinka waan burburay.
2. Marka aad kor u qaadaysid xakamaynta si aad u maamusho dunmiiqa, buuqku wuu sareeyaa the marka kor u qaadida mashiinka si uu u joojiyo dunmiiqa, laakiin u oggolow fallaadhaha kale inay socdaan, buuquna wuu hooseeyaa. Tani waxay muujineysaa in saameynta dunmiiqa ay burbureen。
12 Wax waa in la ogaadaa marka la rakibayo lathe. 1. Mootooyinku waxay u socdaan isla jiho ka dib markay siligyada isku xidhaan. Ha ku beddelin taxanaha wajiga koronto kasta si ula kac ah.
2. Waa inuu jeexjeexaa warqadda shaabadda saliidda oo si taxaddar leh u nadiifi marka mashiinka la rakibo ka dib.
3. Saliida mashiinka saliida leh 20 # jiilaalka ama 30 # xagaaga。DO ha ku badalin saliida saliida leh ee loo isticmaalo gaariga ama saliida Haydarooliga.
Fadlan ka tag meeshan madhan.
Mashiinka Lathe birta
Mashiinka Lathe Mishiinka
Hormoonka Birta Goynta Band arkay
MAXAA LOOGA DAMBAYSTIRIN
100+ shaqaale xirfadlayaal xirfad leh.
Qiimo Dhexdhexaad ah
15+ sano oo khibrad ah
Wax kasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Mashiinka CNC
Maxay yihiin albaabada amniga?
Sida loo Isticmaalo Lathe-ka Birta: Hawlgallada Mashiinnada Lathe Farqiga
Waa maxay Birta Lathe Machine? Adeegso, Qeexid, Hawlgallo, Qaybo, Jaantus
Hordhaca Mashiinka Lathe: 16 Nooc oo Mashiinka Lathe ah
Mashiinka Qalabka Mashiinka Shiinaha
Telefoonka: + 86-15318444939
7 * 24 Saacadood
No 6 Park Area Warshadaha, Dadi Road, Tengzhou, Shandong, Shiinaha
Xuquuqda daabacaadda 2010-2030 © Shandong Tsinfa CNC Qalabka Co., Ltd.